Warshadda Dharka Indhoolayaasha | Warshadaha Shiinaha iyo Soo-saareyaasha Wershada Indhoolayaasha
Naqshadeynta ETEX iyo soosaarida isu-uruurinta ballaaran ee Cilmiga Indhooleyaasha tooska ah. Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Dharka indhoolayaasha ee tooska ah waa mid aad u dhaqameed oo moodada u ilaaliya qoraxda oo indhashareer ku ah dharka tan iyo markii la abuuray boqolaal sano kahor. moodal fudud oo dariishadda ah, fududahay in la shaqeeyo, fududahay in la tirtiro Muuqaalka weyn ee iftiinka la hagaajiyay iyo moodada sare ee qurxinta qolka. ETEX waxay soo saartaa waxbadan ...
ETEX Weave Taxanaha Jacquard Roller Blind Fabrics. Labadoodaba Yarn waa la jeexjeexay iyo Dharka midabkiisu khafiif yahay. Waxa ku jira in ka badan 300 naqshadood oo naqshadaha moodada ah ee jacquard ee ururintayada ku taal. Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Dharka indhoolaha ee loo yaqaan 'Roller Blind Fabures' oo bixiya asturnaanta iyo ku darista moodada meelo kasta. Noqo mid aad u badan oo ka mid ah warshadaha qorraxda-qorraxda tan iyo markii ay ku dartay moodel fudud oo qurux badan daaqadda, ...
ETEX Weave taxanaha Dharka Indhoolayaasha Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Dharka indhoolaha ee loo yaqaan 'Roller Blind Fabures' oo bixiya asturnaanta iyo ku darista moodada meelo kasta. Noqo mid aad u badan oo ka mid ah warshadaha qorraxda-qorraxda tan iyo markii ay ku dartay moodel fudud oo qurux badan daaqadda, oo ay fududahay in la hawl galo, oo si fudud loo tirtiro ETEX waxay soo saartaa in ka badan 20 naqshadeynta dharka cusub iyo agabka dharka sare leh. Halabuurka: 100% polyes ...
ETEX Weave taxanaha Dharka Cadceedda ee Qorrax Wejiga. Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Qalabka qoraxda ee loo yaqaan 'Sunscreen Roller Blind' Dharka wuxuu bixiyaa asturnaanta iyo sidoo kale howlaha shaandhaynta iftiinka. Noqo mid aad u badan oo ka mid ah warshadaha qorraxda-qorraxda tan iyo markii ay ku dartay moodel fudud oo qurux badan daaqadda, oo ay fududahay in la hawl galo, oo si fudud loo tirtiro ETEX waxay soo saartaa in ka badan 20 naqshadeynta dharka cusub iyo agabka dharka sare leh. Po Composi ...
Dharka Zebra, oo sidoo kale loogu magac daray dharka combi, dharka daahyada qaanso-roobaadka, naqshad weyn oo daaqadda dabool leh, waxay daaqadda ka dhigaysaa mid qurux badan daawashada. Iyada oo ku saleysan doorashada ballaaran ee naqshadeynta, dharka Zebra waxay siisaa xalal wanaagsan oo loogu talagalay qurxinta indhoolayaasha. Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Dharka indhoolaha ee Zebra wuxuu siiyaa asturnaan wuxuuna ku daraa moodal meelaha kasta. Noqo mid ka sii badan moodada qorrax-xirka i ...
ETEX waxay xiraysaa oo u adeegsanaysaa uruurinta waaweyn ee Roman iyo dharka daahyada. Dhar iyo isku xirnaan labadoodaba. Dharka Roomaanka iyo daahyada waxay u baahan yihiin dareemo jilicsan halkii ay ka adkeyn lahaayeen sida roller, waxay u fududaanaysaa hagaajinta qaabka iyo waxqabadka jilicsan ee daahyada ama hooska roman. Dharka Roomaanka: ● Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: 100% polyester, dharka gogosha, ama isku-darka isku-darka, dharka doogga ah, maro jilicsan, suuf cotton Dahaarka: Acid Acid of flocking or not dambas ● Ballaadh: 140 / 280cm ballac ● Qaabdhis ： Boolo, Wareeg, .. .
ETEX waxay soo saartaa noocyo kala duwan oo ah Dharka 'Blackout Roller Blind Fabrics'. 100% mugdi madow oo leh ilaalinta UV, buuqa ka hortagga. Iyada oo ay ku jirto walxo khafiif ah iyo lakabyo ku filan oo daahan, tayadayaga mugdiga ah ayaa xoog leh oo ku habboon inuu ku habboon yahay iftiinka qorraxda sare & cimilada UV adag, cimri dherer sare iyo mugdi 100% oo dhab ah. Kaliya maaha inaan ku dhiirigelino moodada iyo fikradaha dharka, waxaan sidoo kale si adag u raacnaa heerka caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka ee alaabta dharka. Dharka indhoolaha ee loo yaqaan 'Roller Blind Fabrics' oo siinaya asturnaanta iyo ku darista dharka ...